HS:- Madaxa maamulka cusub ee Hiiraan Col Cabdi Farax Laqanyo iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan maamulka cusub ayaa maanta u soo xiray tababar talooyin wax ku ool ahne ugu soo jeediyey dhaliyarada Hiiraan ee imtixaanka u galay waaxda maaliyada qeybta canshuuraha.
Dhaliyada imtixaanaadka u fadhiistay oo gaarayey ilaa 40 ayaa u badnaa dhaliyaradii ka soo qalinjabiyey dugsiyada magaalada B/weyne iyo degmooyinka kale ee Hiiraan qaarkood waxeyna intooda badan ku baaseen wareegii hore ee imtixaanka walow ay wali u harsan tahay dhawr imtixaan oo kale ka hor inta aysan bilaabin howlahooda shaqo.
Wararka naga soo gaaraya magaalada B/weyne ayaa sheegaya in dhawaan ay maamulka cusub ka bilaabi doonaan canshuur aruurin guud gudaha iyo dhamaan deeganada ay maamulka cusub gacanta ku hayaan taasi oo noqon doonta mid wax badan ka bedeli doonta mushaarka ciidamada,sugida amaanka iyo guud ahaan shaqaalaha maamulka.
Sidoo kale waxaa laga yaabaa in ay meesha ka baxdo lacagahii baada ahaa ee ay maamulkii hore siin jireen qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada Ethiopia ka jooga halkaas ee ku sugan koontaroolka Kala-Beyr sida ay dhawr mar oo hore ka dhawaajiyeen qaar ka mid ah masuuliyiinta maamulkii hore oo meeshaas ka qaadi jiray dhaqaalo lagu qiyaasay inta u dhaxeysa 2700 ilaa 3500 maalintii walow ay aad u yareyd dhaqaalaha Soomaalida gacantooda ku dhici jiray oo lagu qiyaasay wax ka yar 10%.
hor intii aan magaalada B/weyne lagala wareegin kooxda shabaab waxey maalintii ka qaadi jireen lacago canshuuro ah gudaha magalaada dhaqaalo maalintii u dhigma 30 kun oo dolar iskaba daa magaalada banaankeeda maba tagi karine waxey dhaqaalahaas ka qaadi jireen baabuurta soo gasha iyo kuwa ka baxa. taasi micnaheedu waa in maamulkaan cusub isku filnaan doono hadii ay dowlada federalka ka saacido maamulkaan cusub bajadka ay ku shaqeyn doonaan 3 ilaa 4ta bilood ee soo socda kaliya kadiban iyagaa is bixin doona oo ciidamadooda biilan kara ugu yaraan ilaa 5 kun oo ciidan hadii dhaqaalahaas ay ku dhacaaan amaba la marsiiyo wado sax ah.
Marka laga soo tago gudiga maaliyada ee hada bilawga ah ee ay ku mashquulsan yahiin maamulka cusub waxaan wali nidaan iyo kala danbeyn laheyn mamulka garoonka diyaaradaha magaalada B/weyne oo ay si kumeel gaar ah gacanta ugu hayaan ciidamada Amisom oo ah garoon u baahan ciidamo uniform wata ka mahadleyno nooca fowdada ah ee ay u shaqeyn jireen maamulada qaarkood Hiiraan soo maray waxaan ka hadleynaa maamul wanaagsan oo bulshada gaarsiin kara maamul goboleed qaabkii uu u shaqeyn lahaa.
Sidoo kale xadka Soomaaliya iyo Ethiopia marka ay dalka ka baxaan ciidamada Ethiopia waa lama huraan in la helo customkii hore ee jiray waqtigii dowladii kacaanka maadaama ay shacabka ugu badan ee uu ganacsi kala dhaxeeyo Hiiraan ka yimaadaan dhulka Soomaalida Ethiopia siiba magaalada Qalaafe.
Maamulka cusub ee Hiiraan hadii aysan canshuuraha u qaadin si hufan oo ay bulshadu fahmi karaan iyadoo si joogta ah canshuuraha looga qaadayo shirkadaha waaweyn ee ka howl gala magaalada B/weyne iyo nawaaxigeeda maadaama ay malaayiin dolar ka sameyeen bulshada Hiiraan sanadkii wax canshuur ahne aysan bixin.
Isku soo duuboo maamulkii la yimaada wax qabad iyo hanaan lagu aamini karo si sahlan ayuu u helayaa taageerada shacabka waana bilaaw fiican qorshahan dhalinta Hiiraan loogu abuurayo shaqo ayuu yiri mid ka mid sah wadaadada magaalada B/weyne oo rajo ka muujiyey in uu maamulkaan la imaan doono wax qabad.
· admin on April 20 2013 15:24:39 · 0 Comments · 1716 Reads ·
14,934,393 unique visits